Taxi-be: vitsy mpandeha ny manao saran-dalana 500 Ar | NewsMada
Taxi-be: vitsy mpandeha ny manao saran-dalana 500 Ar
Aleon’ny mpanjifa eto an-dRenivohitra mandray ny taxi-be mampihatra ny saran-dalana 400 Ar miohatra amin’ny 500 Ar raha azony atao. Mitohy koa ny gaboraraka, tsy manaja ny zotrany ny ho an’ny eny Itaosy sy eny Ivato.
Hita taratra eny amin’ny fitaterana ny fahantran’ny Malagasy. Anisan’izany ny saran-dalana, satria vitsy mpandeha ny taxi-be mampihatra ny 500 Ar raha oharina amin’ny 400 Ar, indrindra rehefa mifanindry na mitovy ny lalana. Voakasik’izany ny zotra 109, anisan’ny mampihatra ny 500 Ar, nefa maro ny kaoperativa mifaninana aminy (126, 186, 154, …) rehefa manomboka eny Analamahitsy mihazo an’Analakely na 67 ha. Nifanindran-dalana teo amin’ny fiantsonana Ambatomainty ny zotra maromaro, omaly tamin’ny 4 tolakandro, hiakatra any Analakely na 67 ha. Ampolony ny isan’ny mpandeha tao anatin’ny kaoperativa 126 sy ny 154 nefa tsy nahitana na iray aza tao anatin’ilay kaoperativa 109.
Tsy afa-manoatra rehefa mody
Tsy araka izany kosa rehefa handray fodiana amin’ny hariva ny mpandeha. Tsy maintsy raisina izay fiara hita ary tsy manan-tsafidy koa amin’ny saran-dalana 500 Ar na 400 Ar. Tsy afa-manoatra koa ny mpandeha amin’ny antsojay ataon’ny mpamily sy ny mpanampy azy amin’ny fihodinana antenantenany rehefa hiakatra aty an-dRenivohitra, toy ny fanaon’ny kaoperativa avy any Itaosy, mihodina eo amin’ny vatobe 67 ha na Fiaro Ampefiloha. Toraka izany koa ny avy any Ivato mihodina eny Ambohibao, Andranomena, 67 ha. Tsy misy ny fepetra raisina amin’izy ireny ary mitazam-potsiny ny tompon’andraikitra.